शीर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय चिनियाँ वेबसाइटहरु चीनी क्षेत्र स्कूल
शीर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय चिनियाँ वेबसाइटहरु. के हो यो सबैभन्दा लोकप्रिय वेबसाइटहरु मा चीन? यस लेखमा, परिचय को शीर्ष सबैभन्दा लोकप्रिय चिनियाँ वेबसाइटहरु. लागि उपयोगी गर्ने विदेशीहरू गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ बस्न चीन, तर थाहा छैन के वेबसाइटहरु प्रयोग गर्न । -गुगल जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका मा गरिएको छ शीर्ष खोज इन्जिन मा चीन छ । यो प्रयोग गरेर लाखौं मानिसहरू हरेक दिन । खोज विशाल रैंक नम्बर पाँच मा मा दुनिया यातायात र सबैभन्दा भ्रमण वेबसाइट मा चीन छ । मान्छे प्रयोग गर्न अधिक पाउन वेबसाइटहरु र सेवाहरु अनलाइन. तुलना गर्न अन्य चिनियाँ खोज इन्जिन, जफत शीर्ष बजार मा चिनियाँ खोज इन्जिन छ । यो छ छैन मात्र चीन मा प्रयोग, तर पनि मा प्रयोग मा जापान, दक्षिण कोरिया, संयुक्त राज्य अमेरिका । द्वारा पैसा बनाउन प्रदान मा विज्ञापन को परिणाम को खोज परिणाम । रबिन ली छ एक प्रसिद्ध कम्प्युटर इन्जिनियर चीन मा, उहाँले सह-स्थापित । आजकल, प्रदान गर्दछ, विभिन्न सेवा सहित संगीत, नक्शा, छलफल मंच, विश्वकोश, तस्बिरहरू, भिडियो, आदि, यो सबैभन्दा सिफारिश. छ, चीन को सबै भन्दा ठूलो पोर्टल मा चिनियाँ एकीकृत समाचार, पारस्परिक समुदाय, मनोरञ्जन उत्पादनहरु र व्यापक-प्रयोग गर्न आधारभूत सेवाहरू । सबैभन्दा प्रयोग रूपमा एक अनलाइन कुराहरु जो सफ्टवेयर संग यस्तै र. यो वेबसाइट पनि शीर्ष को एक भ्रमण वेबसाइटहरु मा चीन छ । अधिकांश युवा मान्छे चीन मा प्रयोग मा आफ्नो दैनिक जीवन छ । छन् धेरै खेल र उपकरण यो वेबसाइट मा. त्यहाँ मानिसहरू लाखौं छन् खेल खेल्न र मजा छ. च्याट मार्फत को एक छ, सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक घटनाहरू मा चीन छ । भने तपाईं चीन आउँदै छन्, तपाईं देख्न सक्छौं, अधिकांश मानिसहरू प्रयोग गर्नेछ यो वेब क्याफे छ । दर — चीनको शीर्ष समूह सम्झौता साइटहरु. यो मा केंद्रित भोजनालय समीक्षा, जस्तै भुकनु, र मा एक उपस्थिति छ, अधिक शहर भर चीन । दर पनि एक राम्रो-विकास, पुरस्कार र सदस्यता सिस्टम साथै एक विश्लेषणात्मक मंच लागि व्यापार मालिक र पनि एक लोकप्रिय समूह-खरीद पृष्ठ प्रयोगकर्ता अनुमति दिन्छ कि प्राप्त गर्न भारी छूट मा रेस्टुरेन्ट भने तिनीहरूले सबै सेवा प्रयोग. सबैले प्रयोग दर समूह च्याट छलफल गर्न कहाँ खाने हो एक कहिल्यै-समाप्त प्रवाह दर लिंक वा स्क्रीनशटहरु । साइन, मा ज्ञात चिनियाँ रूपमा नयाँ लहर जस्तै, एक चिनियाँ याहू. यो एक व्यापक जानकारी वेबसाइट मा चीन प्रदान, मनोरञ्जन, समाचार, खेलकुद, सामाजिक घटनाहरू, शिक्षा, जीवन, कथा र सयौं भन्दा बढी सामग्रीहरू मा चीन र दुनिया. समाचार र घटना रिपोर्ट । सबैभन्दा खेल प्रेम हुनेछ छ पहुँच गर्न को वेबसाइट हरेक दिन । अब यसको (यस्तै संग ट्विटर) बन्न नम्बर एक मा चीन । यो वेबसाइट प्रदान गर्ने लक्ष्य लिएको छ, यो व्यापक जानकारी को लागि चिनियाँ. जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका मा शीर्ष भ्रमण भिडियो वेबसाइट मा चीन छ । — यो शाब्दिक अर्थ»उत्कृष्ट र सुन्दर». तपाईं देख्न सक्छौं, सबैभन्दा मा भिडियो यो वेबसाइट मुक्त लागि. मानिसहरू आफ्नो भिडियो अपलोड र साझेदारी गर्न अन्य मान्छे । तपाईं पनि डाउनलोड भिडियो जस्तै तपाईं मुक्त लागि. यदि तपाईं हेर्न चाहन्छन् एक चिनियाँ टीवी शो, सबै भन्दा राम्रो वेबसाइट छ. छ मा विश्व यातायात र चीन । टीवी शो, सिनेमा, संगीत, छ यो पहिले नै प्रवाहमा यस्तै. कारण गर्न कपीराइट कारण हाल वर्ष मा, अब मात्र अनुमति दिन्छ मान्छे मा चीन हेर्न आफ्नो भिडियो नेतृत्व जो, आफ्नो खोज यातायात कम गर्न । औसत साइट मा बिताएको समय पनि कम गरेर दिने, अन्य भिडियो वेबसाइटहरु मौका गर्न. -जस्तै संयुक्त राज्य अमेरिका मा अमेजन यो शीर्ष भ्रमण ई-कमर्स साइटहरु मा चीन छ । को एक छ सबै भन्दा ठूलो ई. पू अनलाइन रिटेलर मा चीन छ । यसको अंग्रेजी वेबसाइट लागि, विश्वव्यापी ढुवानी, मा शुरू अक्टोबर । कम्पनी द्वारा स्थापित भएको थियो लिउ (एक. एक । रिचर्ड लिउ) जुलाई मा, र आफ्नो ई.
यो सुरु रूपमा एक अनलाइन -दृष्टिको स्टोर, तर चाँडै विविध बिक्री, इलेक्ट्रनिक्स, मोबाइल फोन, कम्प्युटर, आदि. मल परिवर्तन डोमेन नाम किन्न जुन मा, र जद । अनलाइन सपिङ्ग गन्तव्य लागि विकल्प को चिनियाँ उपभोक्ताहरु लागि देख व्यापक चयन, मूल्य र सुविधा । यो सबैभन्दा लोकप्रिय छ सीसी (उपभोक्ता-गर्न-उपभोक्ता) अनलाइन बजार मा, चीन यस्तै. दिन्छ साना व्यवसाय र व्यक्तिहरू सेट अप गर्न पसलहरु मा मंच, उत्पादन वा सेवा विक्रेता प्रदर्शन गर्न आफ्नो आइटम बिक्री को लागि वा पुनर्विक्रय मा अनलाइन पसलहरु. सस्तो उपभोक्ता सामान लोकप्रिय छन् मा, र यो सबै सामेल देखि घनिष्ठ परिधान घर सामान छ । शाब्दिक»दूरी जान, एक उपयोगी र भरपर्दो यात्रा वेबसाइट छ । यो एक शीर्ष-शेल्फ अंग्रेजी संस्करण (साथै जर्मन, फ्रान्सेली, भियतनामी र रूसी, अरूलाई बीचमा) कि सामान्यतया छ नै मूल्य रूपमा आफ्नो चिनियाँ, अर्को यहाँ मा चीन छ । फेंग छ, एक हङकङ-आधारित समूह वा टेलिभिजन स्टेशन राख्छ कि एक झन् लोकप्रिय वेबसाइट लक्षित मुख्यतया मा मुख्य भूमि छ । अंग्रेजी नाम फिनिक्स टेलिभिजन । एक सामान्य समाचार साइट सबैभन्दा भाग लागि, फेंग बनाएको छ मा चीन द्वारा साझा कहिले काँही विवादास्पद समाचार र अंतर्दृष्टि यसको मुख्य भूमि समकक्षों अक्सर गर्न अनिच्छुक, सबै खिच्दै बिना पनि धेरै ध्यान वा घृणा अधिकारीहरूले देखि.
यो एक वर्गीकृत विज्ञापन. यसको सेवाहरू समावेश आवास भेट्टाउने, दोस्रो हात बिक्री, खेल, आदि. एक धेरै उपयोगी उपकरण को लागि चीन बाँचिरहेका छन् । अर्थ»एउटै शहर»चिनियाँ मा छ, एक राम्रो-डिजाइन लागि उपकरण जडान जीवित मान्छे मा नै शहर हो । प्रयोगकर्ता पोस्ट मा लिस्टिङ यसको बजार को दायरा कवर सेवाहरू र उत्पादनहरु मा यसको वेबसाइट, कम्पनी आयोजना लिस्टिङ यसको बजार द्वारा सामग्री विभाग, यस्तो जब, आवास, प्रयोग सामान, मोटर वाहन, पहेलो पृष्ठ, जान्छन् र टिकट छ, यो छैन धेरै समय लिन वा पाउन प्रयास र तपाईं आवश्यक के को सम्पर्क विवरण प्राप्त छ जो एक व्यक्ति छ यो । कम्पनी अनलाइन बजार सक्षम स्थानीय व्यापारी र उपभोक्ताहरु जडान गर्न, शेयर जानकारी र व्यापार सञ्चालन गर्न ।
← चिनियाँ महिला डेटिङ साइटहरु समीक्षा डेटिङ चिनियाँ महिला
म छु एक चिनियाँ मान्छे चीन मा छ । म विवाह गर्न चाहनुहुन्छ एक जापानी केटी छ । कसरी म मेरो लक्ष्य हासिल गर्न? भिडियो डेटिङ →